अर्थ/वाणिज्य Archives - Page 298 of 308 - Recent Nepal News
यस्तो बन्दैछ त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक,अब अत्याधुनिक फ्लाईओभर
काठमाडौं,कात्तिक १० । सरकारले त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको विस्तार योजनाको खाका तयार पारेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरण र सोही अनुसारको पुर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनुसार जापान सरकार(जाइका)को सहयोगमा तयार हुँदै गरेको त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । सो योजनाका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने अनुमान समेत गरेको छ । जापानी सहयोगमा अर्बान ट्रान्सपोर्टेश...
लघुवित्त कम्पनीले लघुबीमा जारी गर्न पाउने
काठमाडौं, कात्तिक १०— लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि अब लघुबीमा योजना जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बिमक संघ र नेपाल लघुवित्तीय बैंकर एसोसिएसनबीच भएको सम्झौताअनुसार लघुवित्त कम्पनीहरूले लघुबीमा जारी गर्न पाउने भएका हुन् । सरकारले चालू आवदेखि लघुबीमा योजनालाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबीमा जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सरकारको यस्तो निर्णयप्रति ...
नेपाल बंगलादेश बैंक लि. को बोनस र हकप्रद शेयर स्विकृत
काठमाडौं,कात्तिक ९ – नेपाल बंबंगलादेश बैंक लि. को बाईसौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । सोमवार आ. व. २०७२-७३ को संचालक समितिको बार्षिक प्रतिबेदन पारित गर्दै साधारणसभा सम्पन्न सम्पन्न गरेको हो । बैंकले उक्त साधारण सभाबाट अधिकृत पूँजीलाई रु १० अर्व पुर्याउने, आ.व. २०७२-७३ को मुनाफा रकमबाट चुक्त पूँजीको ३२ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर जारी गर्ने र कर तिर्ने प्रयोजनका लागि १.६८ प्रतिशतका दरले नगद लाभ...
अरुण काबेलीको शेयर निष्काशन कात्तिक ९ देखि, कहाँ-कहाँबाट दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं,कात्तिक ८- अरुण काबेली पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि कात्तिक ९ गतेदेखि साधारण शेयर निश्कासन गर्ने भएको छ। २५ मेगावाट मेगावाटको बिद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीले प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। साधारण शेयरका लागी कात्तिक ९ देखि छिटोमा १२ र ढिलोमा २३ सम्मका लागी आवेदन खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ। इच्छुक...
तीन महिनामा भित्रियो दुई खर्बको विदेशी सामान
काडमाडौं, कात्तिक ८—चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा २ खर्ब २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरका विदेशी सामान भित्रिएका छन् । निर्यात भने १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै भएको छ । यो अवधिमा निर्यातभन्दा आयात ११.७ गुणा बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौ र असोजमा मधेसी मोर्चा गरेको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी वैदेशिक व्यावपारमा ठूलो अवरोध वेहोरेको थियो । नाकाबन्दीले न्यून मात्रै...
एक करोड ल्याउन २३ लाख खर्च
काठमाडौं, कात्तिक ८—बजारमा नगद डलर अभाव हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट कात्तिक महनिाभित्र १ करोड डलर ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीएमबी बैंकबाट डलर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीलाई केही दिन अगाडि सिंगापुर पठाएइएको छ । अधिकारीले सिंगापुरमा गएर गरेको सम्झौता अनुसार एकैपटक १ करोड डलर नेपाल ल्याइने छ। राष्ट्र बैंकले १ सय रुपैयाँ नोटका...
नेपालमा सञ्चालन हुने भो फोरजी,अब सिमकार्डबाटै भिडियो कल गर्न सकिने
काठमाडौं,कात्तिक ७ – नेपाल सरकार नियन्त्रीत नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । यो अनुमतिसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकम पहिलो फोरजि सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी बन्ने भएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक बोर्डले टेलिकमलाई फोरजि सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । टेलिकमलाई १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड मार्फत १५ मेगाहर्जमा फोरजी सेवा सुरु गर्न पाउने गरी अनुमति दिइने भएको...
कुरामा मात्रै सीमित भयो चीनबाट इन्धन आयात
काठमाडौं, कात्तिक ७—चीनबाट इन्धन भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रगति शून्य छ ।चिनियाँ इन्धन आयातबारे छलफल र अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हालको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । नियमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारी महँगा होटेलको खर्च र आकर्षक भत्ता पनि बुझे । तर, इन्धन आयात गर्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । यसै विषयम...
वीरगञ्ज भन्सारबाट साढे नौ अर्ब राजस्व सङ्कलन
पर्सा, कात्तिक ५—चालु आवको असोजमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले रु नौ अर्ब ५१ करोड ६ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७३/७४ को असोजमा भन्सारले रु. आठ अर्ब ५८ करोड ४१ लाख २५ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो । वीरगन्ज नाकाबाट आयात निर्यात सहज हुँदै गएका कारण लक्ष्यभन्दा करिब ११ प्रशित बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिए। असोजमा सो नाकाबाट दुई पा...
सूर्योदय लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड
सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण शेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड गरेको छ । लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको १ लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयरका लागि १ लाख ९ हजार ७ सय १४ आवेदन परेकोमा १० हजार ९ सय २० आवेदकले मात्र शेयर पाएका छन् । कुल आवेदक मध्ये १ हजार ८ सय ३२ आवेदन रद्ध भएका छन् । कम्तिमा ५० कित्ता अर्थात ५ हजार रुपैयाँ र वढिमा १ हजार कित्ता अर्थात १ लाख रुपैयाँसम्मको आवेदन दिन लि...
Previous 1 … 297 298 299 … 308 Next
फेरि भित्रिँदै नयाँ न्यून चापीय प्रणाली, कस्तोे रहन्छ आगामी तीनदिन ?